China Abenzi beLancet yoKhuseleko oluThintelweyo kunye nabathengisi EMVA
Uthotho loKhuseleko lwezoNyango
Uthotho lweeNtloko zoKhathalelo loNgcono
Ingcebiso ngefinger oxymeter
Uluhlu lwegumbi lokusebenza
Uthotho lweemviwo zeGynecological
Ividiyo kwaye bukhoma
Ngaphambili kwezonyango I-Thermometer yeDigital infrared
I-ORIENTMED 812B Mesh nebulizer ene-CE ye-ISO kunye ne-FDA
Isiqwenga esinye esilahlwayo se-hydrocolloid ostomy bag
I-LCD ibonisa ithemomitha yonyango yedijithali
I-50D ANEROID SPHYGMOMANOMETER
I-Lancet yoKhuseleko oluThintelweyo ngokuthambileyo
Ukuvalwa kwenxeba ngonyango
Ithemometha yasimahla yeMercury
I-OTENTICED ORT30C iStethoscope
INSULIN PEN INALIDI
Utyando lwe-PE lonyango oluphefumlelweyo oluselubala
I-80A YOKUXHUMANISA IZINWELE
I-ORT575 yengalo ephezulu yokujonga uxinzelelo lwegazi
I-SYRINGE YOKUPHILA KWEZEMPILO
Ukunxiba okwenzakala kweHydrocolloid
Ukhuseleko: Inaliti ye-lancet yokhuseleko ethambileyo ifihlwe ngokukhuselekileyo ngaphambi nasemva kokusetyenziswa
Intlungu encinci: Uyilo lwemithombo emibini kunye ne-tri-beveled inaliti yokuncancisa ukungena ngesantya esiphezulu kunye nokunciphisa iintlungu, ezenza ukuba isampulu yegazi ive ngathi ithambile.
Elula: Ngqo chukumisa indawo yesampulu yegazi kwaye ucofe kancinci.
Ububanzi benaliti / ubunzulu
0.32mm / 1.8mm
50pcs okanye 100pcs / Ibhokisi
5000pcs / ibhokisi
0.36mm / 1.8mm
0.45mm / 1.8mm
0.5mm / 1.8mm
0.6mm / 1.8mm
0.8mm / 1.8mm
Ukhuseleko: Inaliti ye-lancet yokhuseleko ethambileyo ifihliwe ngokukhuselekileyo ngaphambi nasemva kokusetyenziswa
Intlungu encinci: Uyilo lwemithombo emibini yoyilo kunye nehip-beveled inaliti incam yokufaka isantya esiphezulu sokungena kunye nokunciphisa iintlungu, ezenza ukuba isampulu yegazi ive ngathi ithambile.
Ezintsha: Ukuzimela ngokuzimeleyo, itekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi. Uyilo lokuyila ngokwakho makwenziwe abasebenzi bezonyango kunye nezigulana ziziva zikhuselekile kwaye zithembekile.
1.Twist kwaye ususe ikepusi yokukhusela kwi-lancet
2.Isithuba esimhlophe esimhlophe selancet kwindawo yovavanyo
Cofa i-lancet phantsi kwindawo yovavanyo ukuze wenze inkqubo ye-lancet
Ezinye iintlobo eziphambili:
Egqithileyo ITWIST IGAZI LANCET
Okulandelayo: I-50D ANEROID SPHYGMOMANOMETER
ITWIST IGAZI LANCET
ULAWULULO LWEGAZI LWEGAZI
IZIXHOBO ZOKUTSHALA NGEGAZI
I-HEBEI YOKUTHENGA NGAPHAKATHI NOKUTHUMELA KWANGAPHANDLE CO., LTD
Ifowuni: 0086 13315125256
Imbali yeiglavu ezilahlwayo zonyango
1. Imbali yemvelaphi yeiglavu ezilahlwayo Ngo-1889, izibini zokuqala zeglavu ezilahlwayo zazalwa kwiklinikhi kaGqirha uWilliam Stewart Halstead. Kwinkqubo yotyando, iiglavu ezilahlwayo azinakuqinisekisa nje kuphela ubhetyebhetye besandla sikagqirha, kodwa zikwanyusa kakhulu impilo yezempilo. Iiglavu ezilahlwayo kugqirha kweli qela zithandwa kakhulu. Kuvavanyo lweklinikhi lwexesha elide, iigloves ezilahlwayo kwafunyanwa ukuba nazo ...
Uyisebenzisa kanjani iincanca zeGazi? Ngoku iintsuku ziyanda abantu banika ingqalelo ngakumbi kwimpilo yabo kwaye baye kwiziko lonyango ukunika impilo yabo ukuskena ngokupheleleyo. Ngenxa yesi sizathu isidingo se-lancet yegazi amaxesha ama-3 kunangaphambili. Uyisebenzisa kanjani i-lancet yegazi yaba yinto ebaluleke kakhulu. Indlela yokusebenzisa i-lacet yegazi ngendlela ekhuselekileyo iye yabaluleka ngakumbi. Ngoku makhe sifunde indlela yokusebenzisa uhlobo lwe-lancet yegazi. Uyisebenzisa kanjani iphephancwadi iGazi leLancet Inyathelo loku-1 Ukukhupha ukhuseleko ...